Saddex kalfadhi oo cusub oo ScaleUp ah: The Rebuild Edition tababbarro ganacsi oo bilaash ah ayaa la qorsheeyay - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Saddex kal-fadhi oo cusub oo ScaleUp ah: Dib-u-dhiska Tababarrada ganacsiga bilaashka ah ee la qorsheeyay
In ka badan 350 meheradood oo u janjeedha koritaan-ku-saleysan ayaa gacan ka geystey intii lagu jiray faafida
OLYMPIA, WA - “ScaleUp: The Rebuild Edition,” oo ah iskaashi waxbarasho iyo tababar oo u dhexeeya Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington iyo Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Thurston, ayaa qorsheeyey saddex koorso oo cusub oo sideed usbuuc ah oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar ee daneynaya in lagu gaaro kobaca sarre ee dhaqaalaha. dib u furaa
Koorso kasta oo is-dhexgal ah waa laba saacadood oo dheer waxaana la qabtaa toddobaadkii hal mar siddeed toddobaad. Kaqeybgalaha ugufiican waa milkiile ganacsi ama madaxweye oo kashaqeeya ganacsi uguyaraan laba sano wuxuuna lahaa kahor-COVID dakhli guud sanadkii kabadan $ 100,000. Koorsada, oo sida caadiga ah ku kacaysa $ 1,599, waa u bilaash ganacsiyada u qalma, iyada oo ay ugu mahadcelineyso qayb ka mid ah deeqda Maamulka Horumarinta Dhaqaalaha Mareykanka.
Barnaamijku wuxuu ku saleysan yahay barnaamijka 'ScaleUp' ee Xarunta 'Thurston Center for Innovation Business Innovation', oo u adeegsada aasaaska aasaaska Kauffman Foundation shaqadiisa koorsada Fast Trac® Growth Venture. Ilaa hadda, in ka badan 350 meheradood oo ku yaal gobolka oo dhan ayaa ka faa'iideystey barnaamijka.
Kaqeybgalayaasha shaqada koorsada 'ScaleUp' waxay baran doonaan sida loo xoojiyo go'aan qaadashadooda istiraatiijiyadeed, loo abuuro waxqabadyo cusub oo hawlgal ah, sahaminta suuqyo cusub loona hagaajiyo qadka hoose. Mawduucyada waxaa ka mid ah abuurista nidaamyo ganacsi oo hufan, hagaajinta isku-dheellitirka wax soo saarka / adeegga, abuurista ka-faa'iideysi xoog leh oo suuqa dhexdiisa ah, fahamka bayaannada maaliyadeed iyo wadayaasha ganacsiga ee muhiimka ah, kordhinta tilmaamaha iibka iyo hagaajinta qashinka iibka. “Hoolka daraasaadka” gaarka ah wuxuu siiyaa fursado dheeraad ah latalinta gaarka ah iyo tababarka.
Lisa Brown, oo ah agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, ayaa tidhi "Taageerada ganacsiyada yar yar waa aasaaska dhismaha ee xoojinta bulshada markaynu galno dunidii musiibada ka dib." "ScaleUp: The Rebuild Edition wuxuu siiyaa kaqeybgalayaashu aqoon xirfado muhiim ah oo ka caawin doona inay koraan kana faa'iideystaan ​​fursadaha maadaama dhaqaalaha Washington uu si buuxda dib ugu furmayo."
Ganacsiyada xiisaha lihi waxay kala dooran karaan seddex dariiqo oo kala duwan http://MyStartup365.com/programs/scaleup. Cabirka fasalka ayaa xadidan si loogu ogolaado waqti muhiim ah su'aalaha iyo is dhexgalka kooxda.
Arbacada: Julaay 7 - Sept. 1, 8:30 to 10:00 am
Khamiista: Luulyo 8 - Sebtember 2, 8:30 ilaa 10:00 am
Khamiista: July 8 - Sept. 2, 6:00 to 7:30 pm
Wax lacag ah kuma fadhiyo ganacsiyada u qalma. Wixii macluumaad dheeraad ah, la xiriir James Davis, jdavis@thurstonedc.com, ama (360) 464-6051.
Ku saabsan Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Thurston iyo Xarunta Ganacsiga & Hindisaha Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Thurston wuxuu ka taageeri jiray dhaqaale xoog leh degmada Thurston ilaa 1982 ujeedada laga leeyahay si loo abuuro dhaqaale firfircoon oo waara oo taageera qiyamka dadka ku nool kana shaqeeya degmada Thurston. Aasaaska shaqada ay qabtaan waa saddex mabda 'waaweyn: qorista, haynta iyo ballaarinta. EDC waxay ka shaqeysaa sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka ganacsiyada maxalliga ah iyadoo la siinayo kaalmo farsamo iyo u fidinta u doodid iyaga oo matalaya. Waxay u soo bandhigeysaa fursadaha suuqa shaqo-bixiyeyaasha Degmada Thurston, iyagoo siinaya taageero iyaga si ay u ballaariyaan howlahooda. EDC waxay si firfircoon u soo jiidataa maalgashiga iyo fursadaha shaqo ee gobolka iyada oo loo marayo wacyigelin, dhiirrigelin iyo ergooyinka ganacsiga. Booqasho https://thurstonedc.com/ wixii macluumaad dheeraad ah.
horumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeedganacsiga yaryarWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← OCVA 2021 Duubista Sharci-dejinta Ganacsiga iyo ArtsFund ayaa abaalmarin ku dhowaad $ 11 milyan oo gargaar faafa ah u fidiyay hay'adaha samafalka ah ee Washington →